> Resource > Music > Sida loo Download Amazon Music Si fudud iyo si xor ah
Ma la daalay isagoo si loogu bixiyo music ku saabsan Amazon? Haa, taasi waa waxa aan dareemayo xagga iibka ah ee music. Runtii waa wax aad looga xumaado in marka aad ka heli heeso aad jeceshahay, inaad bixiso iyaga u. Markaas marka xigta, oo aad ka heli song kale jecel yahay, waxaad mar bixiso. Sida markii ay dhaco, waxa aad sameyn waa iibsiga, gadashada iyo gadashada. Waa maxay sababta ma waxay noqon kartaa fudud ugu dhegeysato muusikada hadiyad ahaan? Dhab ahaantii, aad kari waayeen oo waa. Qodobadaan waa kuwa si gaar ah loo qoraa si aad u sheegto sida ay u soo bixi music ka Amazon si xor ah.
Marka hore, eegno nooca qalab waxaan u socoto si ay u isticmaalaan inay muusikada ka Amazon. Waxaa la magacaabay Streaming Audio Recorder . Waa taariikhqorihii ahaa mid audio sare, taas oo ku hayn karaa files wax soo saarka sida wanaagsan sida kuwa asalka ah iyo heeso tag la album daboolaa, magacyada iyo fanaaniinta. Oo download kasta oo heeso ka Amazon si habsami leh. Eeg sida ay hadda u shaqeeyo!
Riix ah "Free download" link si aad u hesho app. Markaas riix faylka .exe si ay u rakibi. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka loo xirxiro, waa in aad sax "Burcad Streaming taariikhqorihii Audio hadda". Ama waxaad riixi kartaa icon desktop-ka si ay u maamulaan.
Si loo hubiyo in aad ka heli karto hees dhameystirtay, fadlan guji hore ee "Diiwaanka" button. Markaasuu ku xidhmaan internetka oo taga si Amazon si aad u hesho heesta aad jeceshahay si ay u qoraan. Inaad si fiican u lahaa off helo song la buuxiyey iyo ka dibna waxa ay la ciyaari. Maxaa dhacaya marka xiga? Eeg in taariikhqorihii music Amazon bilaabmin si ay ula qabsadaan qoraalada? Taasi oo ku saabsan xaalada duubo. Hadda waxaad heli kartaa koob bun ah, taasoo ka dhigeysa app samayn inta kale ee aad u. Marka uu dhamaado duubay, si deg deg ah ayaa kuu sheegi doona song ayaa si guul ah lagala soo bixi la. Si aad u joojiso duubay, "mar kale Record" riix.
3 Transfer in Lugood iyo hawlaha kale
Samaynta ringtones ee telefoonada iyo wareejinta muusigga in Lugood oo la qaban karo Streaming Audio Recorder, sidoo kale. Bedelka in Lugood ay doortaan music oo guji badhanka dar Lugood si hoose. Riix dawan icon markaas aad dooran kartaa qayb kasta oo aad jeceshahay in bitmap ka keentay.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay in wax dajinta tani waa sharci ama sharci darro ah, sax? Haddii aad u qoraan music Amazon kaliya shakhsi isticmaalka aan ujeedo ganacsi, markaas waa ok. Oo waa inaad xusuusataa ma-qeybiso kuwaas songs duubay dadka kale. Waa maxay dheeraad ah, ka Streaming Audio Recorder dhaco category ee VCR ee, DVR iyo MP3 Player.